कहिलेकाहीं म सुने छु मान्छे थियो जो एक भयानक अनुभव संग भुक्तानी देखि चलचित्र डेटिङ साइटहरु, र म के आश्चर्य भएको थियो सबै भन्दा राम्रो तरिका पूरा गर्न सही रूसी एकल । तिनीहरूलाई केही सोधे भने मलाई जान रूस पूरा गर्न एक बालिका । रूस लागि छोटो समय हो । प्रयास गरौं कुरा विवाह एक महिला. तपाईं पूरा गर्न छ जो एक व्यक्ति म आशा पनि हुनेछ सिर्जना रुचि आफैलाई र एक परिवार, र त्यसपछि एक सम्बन्ध बनाउन कहते, र सेट एक विवाह मिति. तपाईं लाग्छ कि यस गर्न, तपाईं आवश्यक कदम गर्न एक विशेष स्थान मा आफ्नो देश । कुनै, तपाईं बस गर्न आवश्यक सही व्यक्ति पाउन र त्यसपछि तपाईं निर्णय गर्न सक्छन् जहाँ बाँच्न छैन भने तपाईं मा नै शहर हो । नै शहर मा, तपाईं हुनेछ जो निर्णय गर्न क्षेत्र. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पूरा गर्न सही व्यक्ति हो । र यो के गर्न असम्भाव्य छ भने तपाईं जान एक विशेष शहर मा एक निर्देशित भ्रमण । यो अर्थमा बनाउँछ, तपाईं सही? फाइदा हुनुको मा एक पर्यटक । केहि भने, यो छ, यसको कमियां छ । म हुँ मात्र लागि क्षेत्र मा छोटो समय र महिला को संदिग्ध हो भने तपाईं को लागि देख रहे एक छिटो जडान, को पाठ्यक्रम तिनीहरूले भने केहि को लागि देख गम्भीर छ । ती लागि देख रहे जो एक छिटो जडान छैन हुनेछ कुनै पनि समस्या संग पर्यटक । यो अर्थमा बनाउँछ जब. तर जब तपाईं सोच्न रूस, तपाईं अचानक लाग्छ कि विवाहित महिला (विशेष गरी विवाहित महिला गर्ने छोड्न चाहनुहुन्छ सबै सार्न र अर्को देश) हो सडक मा, जस्तै मेला मा रूसी शहर । वास्तवमा, तपाईं त लाग्छ भने, तपाईं सही हुनेछ, किनभने त्यहाँ जंगली जनावरहरू मा रूसी शहर । र छन् कुनै विशाल को रूसी महिला विवाह गर्न चाहने. बढ गर्न अर्को राज्य वा शहर भित्र नै देश पनि छ एक विशाल चरण अधिकांश मान्छे को लागि. के एक ठूलो परिवर्तन, एक व्यक्ति को लागि सार्न छ जहाँ एक देश, मान्छे बोल्न फरक भाषा, तिनीहरूले के लाग्छ । मलाई थाहा छ कि जो अधिकांश मानिसहरू जीवित मा पहिलो-विश्व देशहरू भनेर विश्वास कम विकसित विदेशी सदस्यहरू को सपना. तर यो मामला छैन । यात्रा एक धेरै, तपाईंलाई थाहा छ कि मान्छे प्रेम गर्छन आफ्नो देशका. भने, पाठ्यक्रम, त्यहाँ छ कुनै युद्ध मा आफ्नो देश र आफ्नो जीवन मा खतरा छ । लाखौं शरणार्थी, देख्न रूपमा धेरै भागहरु को मध्य पूर्वी वा अफ्रिका । यति भने, तपाईं लाग्छ कि रूस हुनुपर्छ, यो सजिलो तपाईं आनंद लागि विवाह रूसी मान्छे, को पाठ्यक्रम छैन । यो के गर्न, यो साँच्चै आवश्यक छैन मात्र आउन, तर पनि गर्न जाने र बाँच्न. अर्को शब्दमा, तपाईं यो नै फाइदा रूपमा, रूसी, साझेदारी गर्ने नै ठाँउ र सांस्कृतिक प्रतिमान. मूलतः, सबै अविवाहित रूसी महिला विवाहित छन्. विवाह जीवन को अर्थ लागि तिनीहरूलाई छ । तिनीहरूले थिए खडा गर्न एक निश्चित अर्थमा, जीवन विवाह गर्न, छोराछोरीलाई छ, र एक परिवार हुर्काउन. म बिल्कुल केही छ कि यो साँचो हो ।. तर विशाल बहुमत को एकल रूसी जस्तै मलाई. तिनीहरूले धेरै घनिष्ठ परिवार सम्बन्ध, र. बस एक धेरै कम प्रतिशत एकल महिला, बारे एक वा छैन, कसले सक्छ विचार संग एक सम्बन्ध एक विदेशी मानिस । पनि भने तिनीहरू सानो मौका को बैठक कसैले आफ्नो मातृभूमि मा, डेमोग्राफिक लागि कारण, तिनीहरूले अझै पनि छैन सोच्न चाहनुहुन्छ जो कसैले डेटिङ जीवन मा अर्को देश हो । कारण एक लागि यो प्रचार छ । के तपाईं कुरा भने विनियमन मा रूसी मानिसहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवाह, तिनीहरूले तुरुन्तै तपाईं बताउन:»र, एक खराब विचार छ।»को छ, पूर्ण विभिन्न छ ।»म शायद छैन यो भन्न एक विदेशीले रूपमा (किनभने म डराउछु अपमान गर्न), तर तिनीहरूले प्रत्येक अन्य कुरा कि पति मात्र हो देख लागि रूसी पत्नीहरू शोषण र. यो एउटा छवि द्वारा आकर्षित रूसी मिडिया गर्न एक प्रयास मा गिरफ्तारी स्थानीय बालिका भनेर तिनीहरूले विवाह विदेशीहरू सार्न र विदेश । हो, को पाठ्यक्रम, को प्रचार मिसिन विशेष कुराहरू डेलाईट हो, तर मान्छे विश्वास के तिनीहरूले हेर्न. आमा मेरो रूसी मित्र थिए जो विवाह गर्न आस्ट्रेलियाई भनिन्छ तिनीहरूलाई मा रात को बीचमा गर्न सोध्न भने, तिनीहरूले थिए साँच्चै राम्रो महसुस, र छैन बस नाटक हेरिरहेका पछि एक टिभी शो । आमा त थिए कि डर तिनीहरूले लाग्यो आफ्नो पत्नी झूठ बोल्यो थियो, कि तिनीहरूले राम्रो जीवित थिए डराएका थिए किनभने तिनीहरूले आफ्नो पति । म गम्भीर छु । यो तपाईं देख्न के रूसी टेलिभिजन मा. त्यसैले, एक रूपमा शासन, मात्र एक सज्जन जो व्यक्तिगत थाह छ जो कसैले विवाह एक विदेशीले र उत्प्रेरित विदेश निर्णय गर्न यो विकल्प विचार. बहुमत को रूसी जनसंख्या अत्यन्तै शंकास्पद को एक रूसी विदेशी थए । सामान्य विचार छ कि महिला सुरक्षित छैनन् यस्तो एक विवाह हो । यो अर्को कारक छ कि विचार गर्नुपर्छ विचार गर्दा एक भ्रमण रूस को, प्राप्त गर्न एक तरिका थाहा एक संभावित साथी । तपाईं साँच्चै राम्रो हुन बन्द पहिले तपाईं सम्पर्क कसैले तपाईंलाई लाग्छ उपयुक्त छ, र त्यसपछि पूरा मा उनको रूस, त्यसपछि म कार्यान्वयन गर्न सक्छन् आफ्नो प्रारम्भिक रूसी पर्यटन परियोजना गर्न एक साथी पाउन को लागि एक सम्बन्ध छ । तर तपाईं कम से कम एक मौका, कि यो काम गर्नेछ. पनि, पछि कुराकानी तपाईं केही हप्ता लागि, तपाईं प्राप्त हुनेछ एक पहिलो-हात अनुभव डेटिङ को एक रूसी महिला र, संस्कृति, र त्यसपछि तपाईं चाहनुहुन्छ के प्राप्त गर्न तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो । यो ज्ञान यो लायक छैन. त्यसैले केहि सम्झना छैन भने, तपाईं पहिले कुरा सुरु रूसी एकल. तर तपाईं विजयी हुन सक्नुहुन्छ र तपाईंको जीवन धेरै सजिलो चाहनुहुन्छ भने तपाईं पूरा गर्न कसैले संग एक विवाह, केहि गरेर कुरा गर्न एलेना सबैभन्दा महिला मोडेल छ । र तपाईं निश्चित रूप मुद्रा को एक धेरै बचत र बर्बाद प्रयास तुलना गर्न जाँदै रूस गर्न र पत्ता लगाउन प्रयास ब्याचलर गर्न खुला छन् जो, र जो पनि भरोसा छ जसले एक पर्यटक एक्लै छैन पछि एक छिटो जडान. बारेमा दुई प्रश्नहरू बढ. रूपमा अक्सर हुन्छ, मान्छे परिवर्तन आफ्नो स्थिति र देश को सोभियत संघ पछि विवाह । त्यहाँ भएको छ एक वास्तविकता, एक स्लाभिक केटी अक्सर स्वीकार परिवर्तन मा»घर». जब कि, छ कि स्पष्ट छ भने त्यो बिहे एक केटा, त्यो परिवर्तन शहर र देशका सायद, धेरै पटक एक वर्ष (उदाहरणका लागि, एक वर्ष मा अष्ट्रिया, आधा मा अर्जेन्टिना, एक कोठा मा संयुक्त अरब इमिरेट्स, एक कोठा मा मलेशिया, आदि.) रबर्ट, म प्राप्त व्यक्तिगत सल्लाह भने म यो आवश्यक छ ।.
यो साइट सबैभन्दा गम्भीर र कुलीन सेवा । यो व्यक्तिगत साक्षात्कार उपलब्ध छ भने, यो गरिब छ, यो संग गरिन खेलमा कर्मचारी । (हुनत- तयारी निचोड गर्न समय तीस मिनेट मा अधिक दल चाहन्थे). पूर्ण संग एक ध्वनि कार्यक्रम मेरो लागि, अधिकतम अन्तिम छ (सबै भन्दा राम्रो) मौका छ जब सबै अरू असफल भएको छ । र, द्वारा, बाटो तिनीहरूले आवश्यकता पूर्ण ध्यान छ, तिनीहरूले कहाँ गर्न सक्दैन अवस्थित एकै समय: काम, वा अनुसन्धान, वा परियोजनाहरु, वा सोख छ ।. रबर्ट, मेरो व्यक्तिगत परामर्श उपलब्ध छ, एक शुल्क लागि र बुक गर्न सकिन्छ वेबसाइट मार्फत, लिंक माथि । एलेना, बनाउन दुई टिप्पणी प्रतिक्रिया यो लेखमा । छोटो समयको लागि, म उत्प्रेरित गर्न र भेट रूसी महिला मा भाग लिन क्रम मा दैनिक गतिविधिहरु. उदाहरणका लागि, म भेट तीन अलग एकल रूसी महिला मात्र को एक परिणाम रूपमा भएको मेरो आफ्नै पुस्तकालय कार्ड संग एक फोटो. म पनि याद रूसी धेरै अनुकूल छन्, तर विपरीत को परिभाषा मित्रता, केटी, बस आवश्यकता को केही प्रकारको प्रतिबद्धता छ । हो, को पाठ्यक्रम, तपाईं छैन मुस्कान मा सार्वजनिक र हो, तपाईं गर्न सक्छन् एक चिसो फसाउन र बारेमा थप जानकारी पाउन यो»रोजर, त्यसपछि हो । तपाईं योजना भने छैन, तर बस गर्न आउन, जान त गर्न रूस संग भेट्टाउने को आशा एक महिला जो गर्न सहमत भएको आफ्नो पत्नी र कदम संग तपाईं विदेश जब तपाईं त्यहाँ एक पर्यटक रूपमा, यो अर्को कथा छ र फरक स्थापना कार्यक्रम छ । म विश्वास छ कि पुरुष विदेश जीवित धेरै राम्रो हुनेछ बन्द बस बोल्ने रूसी, एकल पुरुष चाहने र सार्न चाहनुहुन्छ विदेश स्थायी, जसले अंग्रेजी बोल्न, अझ बढी सिक्न र सिक्न संग कुराकानी गर्न महिला, जबकि अधिक सिक्ने. म यो लेखमा साधारण अर्थमा छ, तर यो सजिलो छ, मान्छे को सोच को गल्ती अलग । यो नै सल्लाह तपाईं देखि प्राप्त छ जो मानिसहरू अनुभव को खोजन आफ्नो प्रेम विदेश । सबै पछि, यो छैन राम्रो छ कसैले विवाह गर्न प्रेम गर्ने, आफ्नो संस्कृति र साझेदारी गर्न सक्छन् र यो तपाईं संग. अवशोषित एक नयाँ संस्कृति छ, एक ठूलो तरिका बढ्न । तपाईं पनि गर्न सक्छन् प्रेम दुई देशका (वा तीन). नमस्ते, एलेना, म सबै बुझ्न तपाईं भन्नुभयो छु यहाँ, तर कसरी यो छ कि यति धेरै रूसी महिला विदेशी पुरुष पूरा गर्ने समयमा हालैका घटनाहरू सम्बन्ध संग. यी प्रशंसक पर्यटक पनि थिए, तर अनुसार धेरै समाचार स्रोत, दर्जनौं जोडे को गठन समयमा विश्व कप, र अनुसार एक सर्वेक्षण को एकल रूसी, सम्बन्ध संग भेट्न विदेशी प्रशंसक खुला छन् । यस विपरीत छ, जहाँ आफ्नो नम्बर भन्दा कम»मात्र»रूसी महिला । समयमा विभिन्न समाचार स्रोत र, यो पुष्टि भएको थियो कि त्यहाँ थियो एक आयोग संग विदेशी प्रशंसक अधिक पत्ता लगाउन»आदम, विश्व कप थियो एक निश्चित पार्टी पागलपन । यो के छैन, आज तपाईं जान भने गर्न रूस.
बस खरीद टिकट र छोडेर
मूर्ख गर्न पैसा खर्च गर्न सक्छन् जब बस बाहिर जाँच विकल्प र सम्बन्ध सुरु अनलाइन छौं जबकि अझै पनि, घर मा बस लागि डलर । थाहा छ, महिला, आफ्नो मान, रूसी महिला साँच्चै जस्तै हेर्न. पत्ता लगाउन आफ्नो सपना र आकांक्षाओं किनभने, तिनीहरूले के, तिनीहरूले के. प्राप्त अनुभव छ । रूपमा चाँडै तपाईं प्राप्त संग संलग्न कसैलाई र भन्ने लाग्छ»म सबै कुरा बुझ्न». त्यसैले मूलतः, यो अर्थ रूसी महिला थिए केवल खुला गर्न डेटिङ विदेशीहरू विश्व कप समयमा, सही? त्यसैले यदि एउटा विदेशीले रूस भ्रमण गर्दा कुनै विश्व कप, उहाँले प्राप्त हुनेछ स्थानीय नकारात्मक ठेके देखि रूसी महिला । त्यसैले तपाईं के गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भन्न, म जान्दछु कि म छु जो एक व्यक्ति जीवन मा एक जीवन को तर्क छ । तर्क गर्न सबै मलाई । त्यसैले, सिद्धान्त मा, एक विदेशीले छ»आकर्षक»लागि एक रूसी केटी भने मात्र त्यो एक प्रशंसक आईडी वरिपरि उनको घाँटी. आगन्तुक बिना एक प्रशंसक आईडी बिना, एक टी-शर्ट अधिक पत्ता लगाउन»आदम, आफ्नो तर्क ठूलो छ । गर्न भ्कगडा संग मान्छे, म जस्तै म तिनीहरूलाई सहमत. छ जो स्पष्ट एक राम्रो गुणवत्ता मा एक महिला । म भन्न चाहनुहुन्छ कि आफ्नो स्रोतहरू छन्, फोहोर. त्यहाँ भएको कहिल्यै छ, एक ठूलो»आकर्षण»को लागि विदेशी महिला देखि रूस विश्व कप समयमा, रूप मा उद्धृत. यो भएको हुनुपर्छ कम भन्दा केटाहरू थिए जो कुनै पनि अन्य देश समयमा एक घटना को यस प्रकारको, र यो नै थियो बालिका थिए जो संग अतिथि.
सारा कहानी चासो को एक धेरै नियमहरू,»तर साक्षात्कार मा, तिनीहरूले पनि देखाए रूसी बालिका गर्ने दिनांक. विशेष गरी धेरै पत्रकार को केन्द्र मा मास्को भेट यी धेरै जोडे र पनि तिनीहरूलाई अन्तरवार्ता. तिनीहरूले अन्तरवार्ता धेरै रूसी बालिका, जबकि मास्को केन्द्र र बालिका खुल्लमखुल्ला स्वीकारे आफ्नो अरब र ल्याटिन अमेरिकी मानिसहरू देखि मेक्सिको. पत्रकार-ब्लगर पनि फेला यति धेरै दम्पतीले मा फांसी केन्द्र को मास्को, तिनीहरूलाई अन्तरवार्ता, कि रूसी बालिका खुसी थिए नोट मेक्सिकन, अरब. म देखे यो सबै । र के तपाईं बारेमा भन्न रूसी महिला धम्की पत्ता लगाउन अधिक।»
← कोरियन च्याट मायालु कोरियाली प्रेमी कोरिया मा
पूरा एक कोरियाली बालिका →